८ कक्षामा पढ्ने यु’वती बि’रामी भइ अस्पतालमा भर्ना, रिपोर्ट हेर्दा है’रान भएर आमा बे’होस ! – Life Nepali
८ कक्षामा पढ्ने यु’वती बि’रामी भइ अस्पतालमा भर्ना, रिपोर्ट हेर्दा है’रान भएर आमा बे’होस !
निजी स्कुलको ८ कक्षामा पढ्ने कि’शोरी ल’गातार दु’ब्लाउँदै गएकी थिइन् । छोरीको हा’लत देखेर आमाले उनलाई भारतको पञ्जावस्थित एक अस्पताल लिएर गइन् । अस्पतालमा डाक्टरले उनको जाँच गरेपछि आमालाई रिपोर्ट दिंदै छोरी ए’चआ’इभी सं’क्रमित भएको बताएपछि आमा बे’होस भइन् । आमाले छोरी कसरी संक्रमित भइन् भन्ने थाहा नभएको बताएकी छिन् । *** पूरा भिडियो हेर्न तलको लिङ्कमा क्लिक गर्नुहोला ***
कि’शोरीका अनुसार उनको साथमा ११ र १२ कक्षा पढ्ने ३–४ जनाको समूह छ । केही समयअघिदेखि उनीहरुको मित्रता थियो । एक दिन साथीहरुले उनलाई सेतो रंगको पा’उडर ल्या’एर सुँ’घ्न भने । साथीहरुको कुरा मानेर उनले पनि त्यो पाउडर सुँ’घेर हेरिन् । त्यसपछि विस्तारै त्यसको बा’नी भयो । उनले विगत १ वर्षदेखि यसको न’शा गर्दै आएको बताएकी छिन् ।
कि’शोरीका अनुसार गाउँकै केही युवकले ला’गूपदा’र्थको स’प्लाइ गर्छन् । उनले ती केटाहरुलाई चि’न्दिनन् किनकी यो न’शा उनका साथीहरुकहाँ आउँछ । साथीहरुले पछि उनलाई दिन्छन् । यसैले आज उनको हा’लत यस्तो भएको छ ।
Previous यी राशी भएका यु’वती प्रेममा निकै बफादार हुन्छन ! जानी राखौं –
Next एक यु’वतिले युवकलाइ ज’ङ्गलमा ए’क्लै बो’लाएर यस्तो सम्म गरिन ! हेर्नुहोस –